मलाई ७५ प्रतिशतले "हैट" भनेरै चिनुहुन्छ- कलाकार बुद्धि तामाङ - Pokhara News
मलाई ७५ प्रतिशतले “हैट” भनेरै चिनुहुन्छ- कलाकार बुद्धि तामाङ
२०७६ कार्तिक २१, बिहीबार १०:५२
आर.आर. पौडेल, पोखरा न्यूज – २१, कार्तिक । नेपाली चलचित्रमा पैसा छ । वर्षमा ७५ देखि ८० लाख रुपैयाँ मेरो कमाइ हुन्छ । तर खोल्तीमा ७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ पनि हुदैन । पैसा छ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो भन्ने हो पोखरामा भेटिएका कलाकार बुद्धि तामाङ भन्दै थिए ।
‘हैट’ भनेर नै आफुलाई अधिकांशले चिन्ने गरेको र दर्शकको मायाले चलचित्र क्षेत्रमा टिक्न सकेको उनले खुलाए । ‘मलाई चिन्नेहरु मध्ये २५ प्रतिशतले मलाई मेरो नामबाट चिन्नुहुन्छ, बाँकी ७५ प्रतिशतले हैट भनेरै चिनुहुन्छ’ उत्साहित हुदै उनले भने ।
बाल्यकालमा चकचके टाइपको बुद्धिले चकटी बोकेर विद्यालयमा पढेको अझै बिर्सिएका छैनन् । ६ कक्षा पढ्दै गर्दा नाटकमा अभिनय गरेर कलाकारिता क्षेत्रमा उनको आगमन भएको थियो । स्कुलमा डाङडुङ बेञ्च जम्मा गरेर, सुकुल ओछ्याएर, तन्नाको पर्दा बनाएर, महेन्टोल बालेर नाटक खेलेको उनले स्मरण गरे ।
केहि समय संघर्ष गरेका उनले नाटक मार्फत अभिनय सिके अनि बिस्तारै अवसर पाउदै गए । उनी कहिले नाटक, कहिले चलचित्र, कहिले सिरियलमा व्यस्त भने । पछिल्लो समयमा चलचित्रमा व्यस्तता उनले बढाएका छन् ।
गुरुङ चलचित्र ‘शिरसुबा’ सेन्सर पास, बैशाखमा प्रर्दशन गर्ने तयारी
प्रियंका कार्की र आयुष्मान बने ट्रोलको शिकार
पोखरामा सुमन श्रापीत एकल साँँझ आयोजना हुने
विशेष बन्यो गजल वाचनको २ सय औँ श्रृंखला
२०७६ मंसिर २८, शनिबार २०:२३
एक अर्ब ४० करोड लागतमा पोखरामा बन्दै गरेको केवलकार
तनहुँमा दुई बस एकापसमा ठोक्किदा २० घाइते
पोखरामा बाल अस्पताल बन्ने
पोखरामा क्यान इन्फोटेक जारी, आइसिटी स्पिचको उपाधि स्वस्तीलाई
१ रुपैयाँमा इयरफोन !, भाग्यशाली विजेतालाई स्मार्ट फोन
पोखरामा नेविसंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने (विज्ञप्तिसहित)
कोरोना भाइरस लागेको पोखरेली पर्यटन!
‘शरीर दुख्यो र रुघाखोकी लाग्यो भन्दैमा कोरोना संक्रमित हुन्छ भन्ने होइन’ (भिडियोसहित)
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ३ घाइते
पोखराको फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा एक बेपत्ता
नेविसंघका राजेश हमाल पक्राउ, प्रदेश सभा अघि टायर बालेर आधि घण्टा चक्काजाम
साँगेफाँटमा धान झार्दै कृषक